ခံဝန်လေးထိုးပြီးအိမ်မှာအေးအေးဆေးဆေးပြန်နေဖို့ပြောလာတဲ့သူကို အရေးတော်ပုံမအောင်မချင်းမပြန်ပါဘူးလို့ဆိုလိုက်တဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု – Cele Snap
ခံဝန်လေးထိုးပြီးအိမ်မှာအေးအေးဆေးဆေးပြန်နေဖို့ပြောလာတဲ့သူကို အရေးတော်ပုံမအောင်မချင်းမပြန်ပါဘူးလို့ဆိုလိုက်တဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု
ဆရာဝနျမလေးတဈယော ကျဖွဈသလို ပွညျသူခဈြ မငျးသမီး တဈယောကျဖွဈတဲ့ ပိုငျဖွိုးသုကတော့ ကလေးဘဝကတညျးက အနုပညာလောကထဲကို ဝငျရောကျလာခဲ့သူဖွဈပွီး လကျရှိ အသကျ သုံးဆယျအရှယျမှာတော့ အကယျဒမီဆုကွီးတဈဆုကို ပိုငျဆိုငျနိုငျခဲ့ပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။အနုပညာကို ခဈြမွတျနိုးကွတာခွငျး တူတဲ့ ဒါရိုကျတာ ဏကွီးနဲ့ လကျထပျထားတဲ့ ပိုငျဖွိုးသု ကို အနုပညာအသိုငျးဝိုငျးက သုသု လို့လညျး ခဈြစနိုးချေါကွပါ သေး တယျ။
သူတို့ ဇနီးမောငျနှံ နှဈဦးကတော့ အနုပညာကို ခဈြမွတျနိုးကွတာခွငျး တူသူတှမေို့ ဝါသနာပါရာအလုပျတှကေို အကောငျးဆုံးကွိုးစားပွီး ပြျောရှငျစရာကောငျးတဲ့ အခဈြခရီး လမျးကို အတူ လြှောကျလှမျးနကွေတာပါ။အနုပညာလော ကမှာ အောငျမွငျမှုတှအေခိုငျအမာနဲ့ ရပျတညျနကွေတဲ့ အနုပညာရှငျတှဟော လတျတလောဖွဈပျေါနတေဲ့ အခွအေနတှေနေဲ့ပတျသကျပွီး ပွညျသူတှနေဲ့အတူ နစေ့ဉျနဲ့အမြှ အားမလြော့ဘဲ ရပျတညျကာ တဈထောငျ့တဈနရော ကနေ ပါဝငျလကျြ ရှိနတောကို အားလုံးမွငျတှရေ့မှာပါ။
ယခုလညျး ပိုငျဖွိုးသုက သူမရဲ့ လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာ Facebook မှာ ယခုကဲ့သို့ ပေါကျကှဲထှကျလာတဲ့ ခံစားခကျြကို ရေးသားထားတာပါ။“ခံစားခကျြကိုဦးစားပေးခဲ့မိလို့မှားသှားပါတယျ…လို့ခံဝနျလေးထိုးပွီး အိမျမှာအေးဆေးပွနျနရေမယျတဲ့လား ….မိသားစုနဲ့ပွနျတှရေ့မယျတဲ့လား…. အလုပျတှပွေနျလုပျရမယျတဲ့လား…. တခြို့တှအေသကျတှပေေးသှားကွပွီ… တခြိူ့တှထေောငျထဲရောကျကုနျကွပွီ…. တခြိူ့တှအေားလုံးကိုပဈခထြားခဲ့ပွီးလကျနကျတှေ ကိုငျနကွေရပွီ….
သူတို့တှအေိမျပွနျလို့မရကွတော့ဘူး … မိသားစုနဲ့လညျးကှဲကှာကုနျကွပွီ…. သူတို့ခဈြတဲ့အလုပျ‌တှလေညျးလုပျခှငျ့မရကွတော့ဘူး….အဲဒီ့လူတှကေိုငါရှကျတယျ…. အဖွဈမရှိသူဆိုတဲ့ ဂုဏျပုဒျ‌နဲ့တငျငါ့အတှကျလုံလောကျပါပွီ… သစ်စာဖောကျဆိုတဲ့ တံဆိပျတော့အကပျမခံပါရစနေဲ့…. အရေးတျောပုံမအောငျမခငျြးငါအိမျမပွနျဘူး!” ဆိုပွီး ရေးသား ပေါကျကှဲ ထှကျလာတာလေးကို ပရိသတျကွီးအား ပွနျလညျမြှ ဝပေေးလိုကျပါတယျ။ ဖတျရှုပေးတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျ နိုငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါ တယျ။
ဆရာဝန်မလေးတစ်ယော က်ဖြစ်သလို ပြည်သူချစ် မင်းသမီး တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ပိုင်ဖြိုးသုကတော့ ကလေးဘဝကတည်းက အနုပညာလောကထဲကို ဝင်ရောက်လာခဲ့သူဖြစ်ပြီး လက်ရှိ အသက် သုံးဆယ်အရွယ်မှာတော့ အကယ်ဒမီဆုကြီးတစ်ဆုကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာကို ချစ်မြတ်နိုးကြတာခြင်း တူတဲ့ ဒါရိုက်တာ ဏကြီးနဲ့ လက်ထပ်ထားတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု ကို အနုပညာအသိုင်းဝိုင်းက သုသု လို့လည်း ချစ်စနိုးခေါ်ကြပါ သေး တယ်။
သူတို့ ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ဦးကတော့ အနုပညာကို ချစ်မြတ်နိုးကြတာခြင်း တူသူတွေမို့ ဝါသနာပါရာအလုပ်တွေကို အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီး ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ အချစ်ခရီး လမ်းကို အတူ လျှောက်လှမ်းနေကြတာပါ။အနုပညာလော ကမှာ အောင်မြင်မှုတွေအခိုင်အမာနဲ့ ရပ်တည်နေကြတဲ့ အနုပညာရှင်တွေဟာ လတ်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူတွေနဲ့အတူ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ အားမလျော့ဘဲ ရပ်တည်ကာ တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ ပါဝင်လျက် ရှိနေတာကို အားလုံးမြင်တွေ့ရ မှာပါ။
ယခုလည်း ပိုင်ဖြိုးသုက သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာ Facebook မှာ ယခုကဲ့သို့ ပေါက်ကွဲထွက်လာတဲ့ ခံစားချက်ကို ရေးသားထားတာပါ။“ခံစားချက်ကိုဦးစားပေးခဲ့မိလို့မှားသွားပါတယ်…လို့ခံဝန်လေးထိုးပြီး အိမ်မှာအေးဆေးပြန်နေရမယ်တဲ့လား ….မိသားစုနဲ့ပြန်တွေ့ရမယ်တဲ့လား…. အလုပ်တွေပြန်လုပ်ရမယ်တဲ့လား…. တချို့တွေအသက်တွေပေးသွားကြပြီ… တချိူ့တွေထောင်ထဲရောက်ကုန်ကြပြီ…. တချိူ့တွေအားလုံးကိုပစ်ချထားခဲ့ပြီးလက်နက်တွေ ကိုင်နေကြရပြီ….
သူတို့တွေအိမ်ပြန်လို့မရကြတော့ဘူး … မိသားစုနဲ့လည်းကွဲကွာကုန်ကြပြီ…. သူတို့ချစ်တဲ့အလုပ်‌တွေလည်းလုပ်ခွင့်မရကြတော့ဘူး….အဲဒီ့လူတွေကိုငါရှက်တယ်…. အဖြစ်မရှိသူဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်‌နဲ့တင်ငါ့အတွက်လုံလောက်ပါပြီ… သစ္စာဖောက်ဆိုတဲ့ တံဆိပ်တော့အကပ်မခံပါရစေနဲ့…. အရေးတော်ပုံမအောင်မချင်းငါအိမ်မပြန်ဘူး!” ဆိုပြီး ရေးသား ပေါက်ကွဲ ထွက်လာတာလေးကို ပရိသတ်ကြီးအား ပြန်လည်မျှ ဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင် တဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင် နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
MRTV4မှသရုပ်ဆောင်မင်းသမီးခြူးလေးနဲ့ပတ်သက်သည့်ကြော်ငြာများကို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ချို့လက်တွဲဖြုတ်လိုက်ကြောင်းကြေညာ…
အဖေလိုအစ်ကိုလို ချစ်ရတဲ့ ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ အစ်ကိုဖြစ်သူရေမွန်ရဲ့ ညီမလေးရင်နဲ့မဆံ့အောင်နာကျင်စွာနဲ့ရေးသားလာတဲ့ ရေမွန်ရဲ့အကြောင်းလေး